Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Kaarboonka Fiirsada - Warshadda Carbon Fiber Carbon
Maro Carbon Fiber Fibre
Maaddada Kaarboon Fiirsada Fiber Maaddada leh kaarboon ka sarraysa 95% taas oo ku saleysan sida PAN loo soo saaray iyada oo loo sii marayo qiiqa hore, kaarboonka iyo garaaf garaynta. laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
Kaarboonka Fiber Taabashada
Carbon Fiber Tubbo leh kaarboon ka kooban korka 95% taas oo ku saleysan sida PAN lagu soo saaray iyada oo loo sii marayo qiiqa hore, kaarboonka iyo garaaf garaynta. sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
Dharka Kaarboon Fiber Midab leh
Midabka Kaarboonka Fiber Midab leh oo leh kaarboon ka kooban 95% taas oo ku saleysan sida PAN lagu soo saaray iyada oo loo sii marayo qiiqa hore, kaarboonka iyo garaaf garaynta. laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
Cufan Carbon Fiber Fiber oo ka kooban kaarboon ka kooban 95% oo ku saleysan sida PAN loo soo saaray iyada oo loo sii marinaayo qiiqa hore, kaarbooneysiinta iyo garaafiska. laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
Satin Weave Carbon Fiber oo leh kaarboon ka kooban 95% taas oo ku saleysan sida PAN lagu soo saaray iyada oo loo sii marayo qiiqa hore, kaarboonka iyo garaaf garaynta. laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
Qiimaha Honeycomb Carbon Fiber Fabric oo leh kaarboon ka kooban 95% taas oo ku saleysan sida PAN loo soo saaray iyada oo loo sii marayo qiiqa hore, kaarboonka iyo garaaf garaynta. walxaha laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
Qiimaha Kaarboonka Fiberka ah oo leh kaarboon ka kooban 95% taas oo ku saleysan sida PAN loo soo saaray iyada oo loo sii marayo qiiqa hore, kaarbooneysiinta iyo garaafiska. laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
Carbon Fiber 4k oo ka kooban kaarboon ka sareysa 95% taas oo ku saleysan sida PAN loo soo saaray iyadoo la adeegsanayo qiiqa hore, kaarbooneysiinta iyo garaaf garaynta. sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
2 2 Fiber Kaarboon
2x2 Carbon Fiber waa fiber gaar ah oo ka kooban kaarboon ka kooban 95% taas oo ku saleysan sida PAN loo soo saaray iyada oo loo sii marayo qiiqa hore, kaarboonka iyo garaaf garaynta. walxaha kaarboon laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay shaqeyn, dabacsanaanta fiilooyinka dharka.
Maro adag Maro adag, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric, Maro Maro ah, Maro adag Dahaarka Acrylic, Aluminized Maro adag,